Suldaan Daahir Ilkadahab oo talo wanaagsan oo Taariikhi ah siiyey Xisbiga Faroole [Dhageyso] - Horseed Media
Horseed - Somali News - Breaking News on The HorseedHorseed is a leading independent Somali News organization, providing the latest news and analysis, from Somalia and International.	Home
Suldaan Daahir Ilkadahab oo talo wanaagsan oo Taariikhi ah siiyey Xisbiga Faroole [Dhageyso] February 12, 2013 Kulankii Xisbiga Horsed iyo Odayaasha Bari (War Dhafoorkuu ku yaal!) [Xaquuqda Sawirka: Raxanreeb]Waxaa maalinimadii Axadi ka dhacay magaalada Bosaaso kulan ay soo qaban qaabiyeen xubno kamid ah xisbiga Horsed ee xukuumada Puntland, kulankaasi oo lagu qabtay xarunta gobalka ayaa lagu soo bandhigay qorshe uu maamulka Faroole ku dooneyo inuu awood militari u adeegsato siyaasiyiinta kasoo horjeeda.
Xubnihii Kulankaas ka qeybgalay waxaa kamid ahaa Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Siciid Maxamed Raage,Wasiir Kuxigeen amniga Cabdijamaal Cismaan Maxamed,Taliyaha Ciidamada Booliska Maxamed Siciid Jaqanaf iyo Guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan.
Fadeexadii “SOO KOOB HADALKA”
Kulankaas ayaa waxaa sidoo kale loogu yeeray qaar kamid ah odayaasha iyo ganacsatada oo loo sheegay in xukuumadda Puntland damacsan tahay inay tilaabo ka qaado siyaasiyiinta kasoo horjeeda ee ku sugan gudaha magaalada Bosaso.
Kulanka ayaa dood kulul ku dhexmartay qaar kamid ah odayaasha iyo xubnaha ku jira xisbiga Horsed ee iyagu shirka soo qaban qaabiyey.
Kadib kulankan ayaa waxaa banaanka xarunta Gobalka shir jara’iid ku qabtay qaar kamid ah odayaasha oo ku baaqay in wax walba nabad lagu soo dhameeyo.
Waxaa la yaab noqotay kadib markii wakiilka xisbiga Horsed ee Bari ahna Guddoomiyaha Gobalka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan lasoo booday hadalka ah “SOO KOOB HADALKA” erayadaas oo uu ku yiri Suldaan Daahir Ilkadahab oo kamid ah Issimada ugu waaweyn gobalka Bari iyo Puntland, xili uu ka hadalayey NABADA PUNTLAND iyo KAALINTA ISSIMADA.
Hadaladii Suldan Daahir oo loo diiday saaxafada inay faafiyaan
Suldaan Daahir Ilkadahab [Xaquuqda Sawirka: SBC]Suldaanka ayaa taabtay arrimo xasaasi ah oo la xariira sababta ay Issimadu u diideen inay ka hadlaan siyaasadda Puntland iyo isagoo talo muhiim ah siiyey xisbiga Horsed iyo maamulka talada haya, balse xubnihii Horsed ee halkaasi ku sugnaa oo dhibsaday ayaa amar ku bixiyey in Suldaanka uu hadalka soo koobo, isla markaana warbaahinta ku amray inaysan faafin karin hadalka Suldaanka.
Khudbada Suldaanka ayaa sidoo kale laga saaray ama aan la raacin warbixinada ka baxay telefishinada iyo idaacadaha ku yaal magaalada Bosaso.
Hadaba Horseed Media waxay halkan markale si gaar ah idiinku soo gudbineynaa codkii suldaanka ku hadlaya magaca Issimada Puntland (Suldaan Daahir Ilkadahab), waxaadna bartamaha markuu marayo daqiiqada 2:48 maqli doontaan Guddoomiyaha Gobalka Bari oo Suldaanka si anshax darro ah ugu sheegaya inuu hadalkiisa soo koobo xili uu Suldaanka ka hadlayey kaalinta ay Issimadu ku leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo sida ay dowlada (Xisbiga Horsed) dhegaha uga xiratay in Issimada ay kaalintooda gutaan oo Nabada iyo waan waan dhex dhigaan iyaga iyo siyaasiyiinta mucaaridka ku ah.
Suldaanka ayaa hadlayey 4:38 daqiiqo wuxuuna intaas kusoo koobay taladii ugu wanaagsaneyd oo qof iyo ummadba lasiiyo isagoo weliba sii raaciyey Duco muhiim ah.
Qodobada uu Suldaanka ka hadlay waxaa kamid ah:
1- Nabada sidee baa loo sugi karaa?
Suldaanka ayaa sheegay in Nabaddu ay labo dhinac ka timaado oo kala ah Dowlada iyo Shacabka, wuxuuna u sheegay in dowladda kasoo baxdo qeybteeda oo ay noqoto iyadu mid ka shaqeenaysa NABADA, shacabkuna sidoo kale noqdo mid kaalintooda kasoo baxayaan, maadaama nabada cid walba u baahan tahay.
2- Talada ka timid Xisbiga Horseed ee ah inaan Odayaasha iyo Isimada aysan u tegi karin siyaasiyiinta Mucaaridka oo uu Suldaanka ku tilmaamay fikir khaldan oo aan Dhaqanka iyo Caqli midna ku jirin.
Suldaanka oo la yaaabay fikirka xubnaha Horseed ayaa yiri “…Waa loo tagaya qof walba wuxuu tabanayo waa la weydiinayaa, Hadii dowlada khalad leedahana waan u sheegaynaa, wixii danta ku jirto…” ayuu yiri Suldaanka,
3- Isimada inay arkeen in dowladu aysan Taladooda rabin, sidaasna keentay inay ka gaabsadaan intii Ceeb imaan lahayd!
Suldaanka ayaa sheegay inay Issimada Puntland arkeen oo ficil ahaan usoo baxday inaan dowladu dooneyn inay Issimada arrimaha taagan soo dhexgalaan, isla markaana ay issimadu ka fogaadeen in dowladu dhib u aragto iyaga saasna ku doorbideen inay ka gaabsadaan xaaladda, illaa loo furayo waddada Isimada ay hawsha kusoo geli lahaayeen.
“….Anagu ISIMO hadaanu nahay haddii aan Runta idiin sheegno…….Hadii talada naloo dhiibi lahaa waxaanu sameyn lahayn sidii Awoowayaasheen wax ku xalin jireen, GEED-ka hoostiisa baanu fariisan lahayn.. GAR baanu qaadi lahayn…..Markaas (qof)-kii GARTA leh waanu siin lahayn, kan kalena joog baanu oron lahayn….Balse waxaa noo muuqatay Inaan naloo ogoleen baa noo muuqatay….Markaas baanu niri war intii nala eedeyn lahaa war aan GAABSANO saanteena…Aan sugno wakhtigeen…..” ayuu yiri Suldanka oo adeegsanaya MAAH MAAHYO qadiimi ah, balse waxaa loogu jawaabay si “anshax xumo ah” SOO KOOB HADALKA.
4-Isimada inay diyaar u yihiin in ay GARTA galaan hadii wax loo dhiibto balse aysan jirin cid illaa iyo hada GARTA u dhiibatay
Suldaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Isimada ay diyaar u yihiin inay xalka raadiyaan, balse wuxuu arrintaasi raaciyey in marka hore loo baahan yahay rabitaanka ah inay kaalintooda gutaan, isagoo u sheegay dowlada ama xisbiga barakeysan inay issimada kaalintooda u daayaan.
5- In shacabka Puntland ku dhaqan Walaalo yihiin oo aan dhibaato iyo dagaal la dhexdhigin
Suldaanku wuxuu kula taliyey dhamaan shacabka inaysan ogolaan in dhibaato la dhex dhigo oo laga wada shaqeeyo nabada, shacabkuna noqdaan kuwo dantooda garta.
Su’aashu waxa weeye hadalkan qofkuu deeqi waayey maxaa deeqi doona?
Jees Jeeska iyo Isla weydnida waa lagu kufaa! [Xigmad Horey loo yiri!]
Waxaa xiliyadan danbe caado u noqotay ragga mas’uuliyiinta sheegta ee xisbiga Madaxweyne Faroole ku jira inay sida ay had iyo goor doodaan ulla hadlaan qofkii qaba fikir ka duwan kooda, iyagoo aan tixgelin sharafta qofkaasi ama dhaqanka suuban, aaminsana inuusan jirin awood sharciyadeed ama dhaqan oo la xisaabtamaya, taasi la yaab maaha oo waxay ku timid dulqaadka shacabka Puntland.
Dhaliil Saxaafadda ku socota!
Waxaase nasiib darro ah in qaar kamid ah Saxaafadda Ganacsiga ay warka ka reebaan hadalka Suldaanka xigmadda ku hadlay, balse wax lala yaabo maaha maadaama xiligan qofkii la baxa lacagta warkaas lagu faafinayo uu awood u helo inuu xataa sheego waxa warkaasi lagu darayo iyo waxa laga reebayo, taasi oo ah xaraash qiimo jaban lagu iibiyey “madax-banaanidii” tafaftirka wararka ka baxa saxaafadda ganacsiga ee Soomaaliyeed, waana xeerka aan qorneyn oo u yaal saxaafadda ganacsiga ku jirta.
Balse haddaan anigaba u doodo saxaafadda Puntland, waa gartood oo horey bay dowlada dalka ka talisa u sheegtay in la xiri doono warbaahintii ka hadasha wax aysan jacleysan madaxda dowlada, waa mid meesha ku jirta in saxaafadda ganacsiga ku jirta ay illaalsadaan ganacsigooda.
Walow ay mudan tahay in mar mar ay isku dayaan in ay wakhti kooban siiyaan danta guud iyo warka micnaha u sameenaya bulshada xittaa hadii ay cadaadis kala kulmayaan dadka iyo maamulada lacagta kusiiya baahinta wararkooda.
Ayaan darada muuqata iyo garowshi la’aanta Rag mas’uuliyada sheeganaya!
Canshuurtii Puntland oo si xoogleh loogu isticmaalayo in warbaahinta la iska dhex arko. [Sawirka: Raxanreeb]Maamulka Puntland ee xisbiga Horsed baa dhaqaale badan ku bixinaya sidii asbuuc walba saxaafada uga soo dhex muuqan lahaayeen, xili dayac weyn uu ka muuqdo adeegii bulshada ee looga fadhiyey inay wax ka qabtaan.
Waxaa la yaab ahayd in Guddoomiyaha Gobalka Bari sidii askari waardiye ah uu daba taagaan Isimada iyo Nabadoonada xiligii ay warbaahinta la hadlayeen iyaga oo banaanka ka jooga xafiiskiisi, isla markaana amar inuu ku bixiyo inaan la siideyn hadalada Isimada Nabada ka hadlaya, waxay tani ummadda soo xasuusineysaa Wakiiladii Xisbiga Hantiwadaaga Kacaanka oo Subax walba Shaqaalaha dowlada ku khasbi jiray inay Qaadaan (Gulwadoow Siyaad Aabihii Garashada).
Balse hadda waxay Mareysaa in Isimada oo nabad ka hadlaya hadalka Soogaabi la yiraaho, ama culumaa’udiinka duceenaya la yiraaho ducada soogaabi ama Xildhibaan qiirooday la yiraaho mucaarid “Doqon ah”baa tahay!?
Madaxweyne Faroole oo laftiis xubin horey uga soo ahaan jiray Xisbigii Hantiwadaaga hadan ah Guddoomiyaha Xisbiga Barakeysan! ee Puntland ka arrimiya, kuna faana in Xisbigiisa ay halkudhigyada iyo barnaamijyada u diyaariyaan RAG yaqaan hawsha, isaga oo ula jeeda Gaashaan iyo dhawr kale oo XHKS kaadiriin uu madaxmaray ka ahaa, ayaa dhawaan mar uu khudbeenayey sheegay in Masaajidad badan ee laga dhiso Tuulooyinka yar yar ay kusoo gabanayaan wadaado xun xun oo aan loo baahneyn (Argagaxiso), waxaase su’aashu tahay tani maxaa xigi doona? Tani waa hubaal inay tahay xigmad laga soo min-guuriyey falsafadii Xisbigii Hantiwadaaga Kacaanka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya dhaxalsiiyey meesha uu maanta yaal.
Inkastoo la oron karo Maxamed Siyaad Barre AUN wuxuu ahaa siyaasi wax badan dhaamay siyaasiyiinta maanta joogta, maadaama uu weli duco ku helo Jidka dheer ee laamiga ah iyo Dekkada uu ka dhisay Bosaso oo noqotay mid ay ummada reer Puntland iyo Soomaaliyeed ku badbaadaan kadib burburkii dalka ku habsaday.
Dekkada Bosaaso iyo Laamigii xukuumadii Maxamed Siyaasi Bare ka dhistay Bosaso illaa iyo gobalada dhexe ayaa ah mid hawlbowle u ah dhaqaalaha Puntland balse Laamigaasi ayaa hadda waayey wax dayactira oo burburka ku yimid hagaajiya ama keena laami cusub, kadib 14 sano oo canshuur laga aruurinayey shacabka Puntland.
Waxaa xusid mudan in Guddoomiyaha Gobalka Bari Mr.Galan ahna wakiilka Xisbiga ee gobalka uusan soo hadal qaadin arrimo muhiim u ah gobalka uu sheeganayo inuu Guddoomiye u yahay.
Caasimada gobalka Bari ee Bosaaso ahna Caasimada Ganacsiga ee Puntland ee dhaqaalaha ugu badan soo galo, lagana qaado canshuurta halbowlaha u ah dhaqaalaha dalka, in xiligan muddo 4 bilood ah ay go’an tahay HALKA “1″ wado ee laga soo galo, ahna halka wado ee laga baxo ee laamiga ah!
Ma jiriri-coodaan Kamana Xumaadaan: Markii ay arkaan Dayaca ka muuqda waddada Laamiga ah ee soo gasha Bosaaso “Caasimada Ganacsiga Puntland” !
Talo Wanaagsan: Mudane Guddoomiye bal horta ka bilow inaad adiga iyo xubnaha kale ee Xisbiga Horsed mushaharka aad ka qaadataan lacagta canshuurta shacabka ku dhistaan jidka Bosaaso, intaydan afka qaban Isimada “Nabada” ka hadlaya oo ummada iyo xisbiga Barakeysan talada siinaya.
Waxaa Nasiib darro kale ah in Barnaamijka Dimuquraadiyeenta Puntland laga illaaway in lagu daro in Guddoomiyayaasha Gobalada ay noqdaan kuwo ku yimaada hab doorasho ah, oo aan ku imaan magacaabista hogaamiyaha maamulka ama xisbiga, taas ayaa ah asaaska Dimoqraadiyaddu, maamul hoos ka soo bilowdey ilaa kor.
Haddaan soo gaba gabeeyo faalladan kooban, kolay waxaa muuqata in shacabka Puntland ay dulqaad badan yihiin oo ay meel iska dhigeen inay wax adeeg ah ka sugaan maamulkii ay dhisteen oo hada noqday hal xisbi oo danahooda u adeegta, balse waxaa nasiib xumo ah hada in la isugu yimid “NABADII” oo ahayd shayga kaliya oo ay reer Puntland illaalsanayeen, waxaana la is weydiinayaa xisbigan Barakeysan! dalka iyo dadka halkee ku furi doonaan?
Horseed Media Editorial
Horseed Media is using Facebook comments on stories. To post a comment, log into Facebook and then add your comment. We ask you to avoid personal attacks, and please keep your comments relevant and respectful. Latets News
Wasaarada Ciyaaraha Puntland oo doorashadii Muqdisho ka dhacdey ku tilmaantey mid aan xalaal ahayn (Dhageyso)Wasaarada Ciyaaraha iyo Dhalinyarada Puntland ayaa maanta shir jaraa'id ay qabatay uga hadashay doorashadii shalay [Continue Reading...]Ururka IGAD oo Maleeshiyadii Barre Hiiraale Tababar u Furaya.Nicholas Kay oo Muqdisho shir kula qaadanaya Xildhibaanada ka soo jeeda PuntlandIsra’iil oo Falastiiniyiin dhul horleh ka boobtayReer Galbeedka oo sii wada hubeynta Kurdida CiraaqDON’T MISS ANY UPDATE
Wasaarada Ciyaaraha Puntland oo doorashadii Muqdisho ka dhacdey ku tilmaantey mid aan xalaal ahayn (Dhageyso)
Ururka IGAD oo Maleeshiyadii Barre Hiiraale Tababar u Furaya.
Nicholas Kay oo Muqdisho shir kula qaadanaya Xildhibaanada ka soo jeeda Puntland